Home Hindi, Warbixinada Maanta WOOW: Shirkadda Qeybisa Filimaanta YRF Oo Filimka Tiger Zinda Hai Ka Faa’iday Rikoor Gaar Ah..
Salman Khan ayaa soo saaray dhamaadka sanadkii 2017 filim cajiib ah kaas oo qaab dhaqaale waali ah suuqa kusoo galay waana filim xogtiisa marka la eego qaabka filimkaan uu ganacsi ahaan u sameeyey iyo sidoo kale waxa laga filandoono oo ah inuu yahay filim muhiim ah.
Fiimkaan ayaa hada laga sugayaa inuu sii wado bandhigiisa rikoorka ee dhanka Box Office-ka ,waxaana uu hada sameeyey rikoor aan weli ka dhicin dhanka Box Office-ka.
Salman Khan iyo Katrina Kaif ayaa dhanka kale lahaaday saameeynta ugu badan ee filimka waxaana jilaayaashaan ay sameeyeen rikoor waali ah dhanka Bollywood-ka , sidoo kale xiisaha ayaa isku keenay maadaama ay wada shaqeeyeen 10 sano kadib.
Tiger Zinda Hai ayaa noqday filimka keliya ee lacagaha ugu badan ka shaqeeyey Box Office-ka gaar ahaan marka la fiiriyo filimaanta qaabilsan qeybintooda ee Yash Raj Films(YRF), waxaana rikoorkaan heeystay oo lagala wareegay Dhoom 3.
Filimsameeyaha caanka ah ee Ali Abbas Zafar ayaa dhanka kale lahaandoona amaanta gaarka ah ee filimkaan , sababtoo ah waxaa uu waqti kooban ku bixiyey aragtida filimkaan iyo sidoo kale in filimkaan la hirgeliyo.
Filimkaan ayaa shaqeeyey muddo laba maalmood 50 crores , waxaa uu sidoo kale gaaray 100-crore muddo 3 maalmood , waxaana ay arintaa noqotay mid layaab leh.
Filimkaan marka xaqiiqda laga hadlo waxaa uu noqday filim gilgilay Box Office-ka waxaana uu sidoo kale sameeyey qaab waali aan caadi ahayn.